Wasiir Goodax oo falcelin adag kala kulmay shacabka iyo madaxda Puntland. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Wasiir Goodax oo falcelin adag kala kulmay shacabka iyo madaxda Puntland.
April 18, 2019 - By: Mohamud Nadif
Wasiirada Wasaarada WaxbarashadaDawlada Federaalka Ah ee Soomaaliya Cabdilaahi Goodax Barre ayaa shalay war uu ka akhriyay Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed waxa uu ku sheegay in Puntland ay diiday ka qaybgalka imtixaan qaran oo wasaaradu ay qaadi lahayd, ugu danbayna waxa uu sheegay in ay isku tashadaaan.
Markii warkaasu soo baxay ka dib waxaa si adag uga falceliyay shacabka reer Puntland, Xubno horay xilal uga soo qabtay iyo masuuliyiin ka tirsan golaha fulinta iyo sharci dejinta dawlada Puntland.
Dadka sida adag uga hadlay waxaa ka mid wasiiradii hore ee Waxbarashada Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxaa iyo Cali Xaaji Warsame, Wasiir Juxaa wuxuu Goodax faray in uu faraha kala baxo waxbarashada Puntland taasina ay tahay shaqo u gaar ah maamul goboleedyada, Cali Xaaji dhankiisa wuxuu qiray in waxbarashada Puntland dadaal adag lagu soo bixiyay, loona baahan yahay goaanada noocan in loo fiirsado.
Qoraalka Wasiir Juxaa
Dadka kale ee ka hadlay waxaa ka mid Wasiir ku xigeenkii hore ee Waxbarashada Puntland Dr Maxamed Cali Faarax oo haatan ah wasiir ku xigeenka Wasaarada Cadaalada waxa uu sheegay in Wasaarada Waxbarashada heer federaal iyo mida Puntland ay 2017 ku heshiiyeen inta laga soo dhamaystirayo dastuurka qabyada ah ay Puntland xaq u leedahay qaadista imtixaanaadkeeda.
Wasiir ku xigeenka maaliyada
Maxamed Cabdiqaadi Cismaan Agaasimihii hore ee Wasaarada Waxbarashada haatana ah wasiir ku xigeenka Maaliyada wuxuu isagu uu sheegay in Hay’ada Africa Education Trust ( AET ) ay imtixaanaadkaas kusoo diyaariso Nairobi, Suuqyada xamarna lagu iibiyo, waxa uu sheegay in Wasiir Goodax uu ku shaqeeyo guriga Raisal wasaaraha oo uusan lahayn xafiis.
GKX 2 ee baarlamanka PL
Ismaaciil Maxamed Warsame Gudoomiye ku xigeenka 2aad ee baarlamanka ayaa ka mid ah dadka iyaguna arinkaan ka hadlay Ismaaciil Maxamed Warsame Gudoomiye ku xigeenka 2aad ee baarlamanka PL oo u jawaabaya Wasiir Goodax ayaa yiri
” Waa xildhibaan iyo wasiir ee Dastuurka qabyadaha ah, haka shaqeeyo dhameystirkiisa ” ayuu yiri xildhibaanku.
Sidoo kale dhalinyarada Puntland ayaa falcelino adag ku qoray baraha Twitterka iyo Facebook iyagoo Wasiir Goodax ugu baaqay in uu ka laabto goaanka uu qaatay oo ay ku tilmaameen mid ka fiirsasho la’aan iyo fudayd ahaa.
Axmed Sarsarey oo ka mid dadka ka falceliyay hadalka Wasiirka wax uu qabaa in wasiir Goodax u baahan yahay in loo sharxo hanaanka imtixaanaadka Puntland.
Cabdiweli waberi isagu waxa uu ku doodaya in Waxbarashadu ay ka mid tahay awoodaha ay wadaagaan dawlada dhexe iyo dawlad goboleedyada sida uu qabo dastuurku isagoo xiganaya qodobka 52aad.
Ciise Dhoolawaa oo masuul ka ahaa hay’ada Macdanta ee Puntland waxa uu ku tilmaamayaa in Goodax weli kasoo horjeedo nidaamka federaalka ah, waxa uu sheegay in hadalkiisa ay ka muuqata aqoon yari ka haysata Dastuurka.
Burhaan Bulxan ayaa ka mid dadka qaybta twitterka ka falceliyay waxa uu sheegay in wasiir Goodax uu u xuubsiibtay burcad dawladeed.
Marka laga yimaado jawaabaha qaraar ee shacabka iyo Madaxda reer Puntland kaga falceliyeen hadalka wasiirka weli Wasaarada Waxbarashada Puntland kama aysan hadal, Balse Madaxweyne Deni ayaa horay walaac uga muujiyay talaabooyinka Wasiir Goodax, isaga oo sheegay in weli dalka loo maamulayo hab Unitery System ah.
Maxamuud Nadiif Shire